Prof Togane “Aniga oo da’ ah ayuu Safiirku isku key daray lacag iyo dumar fasahaadsan” | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Prof Togane “Aniga oo da’ ah ayuu Safiirku isku key daray lacag iyo dumar fasahaadsan”
Prof Maxamuud Siyaad (Togane) oo kamid ah aqoonyahaanada Soomaaliyeed iminkana ku sugan dalka Canada ayaa kawarbixiyay dhacdo uu kala kulmay Danjiraha Somalia u fadhiya dalka Mareykanka Axmad Ciise Cawad.
Togane oo inta badan ka hadla arrimaha la xiriira Siyaasada Somalia, ayaa waxa uu sheegay in nasiib darro uu u arko in isaga oo da’ ah uu Danjiraha ku martigaliyo lacag iyo dumar, sida uu hadalka u dhigay isaga oo wareysi siinaayay Idaacad lagu magacaabo R/doon.
Togane waxa uu sheegay inay u muuqato in meel cidla ah looga tagaayo mas’uuliyada ay Umadda Soomaaliyeed u dhiibteen madaxda dalka, waxa uuna nin anshax xun ku tilmaamay Danjire Axmad Ciise Cawad.
”Anigu waxaan ahay nin da’ ah Cawad waxa uu si lama filaan ah iigu soo diray lacag iyo dumar, anigu waxaan qaatay lacagta, dumarkii qurxoonaa ee uu iisoo dirayna waan iska diiday” ayuu yiri Prof Maxamuud Siyaad Togane oo u waramaayay Idaacadaasi oo fadhigeedu yahay magaalada Minneapolis ee cariga dalka mareykanka.
Prof Maxamuud Siyaad ayaa Danjiraha ugu baaqay inuu wax ka badallo dhaqan xumadda uu ku sheegay inay duleynayso Soomaalida dhaqankii wanagsana ee ay lahayd.
Waxa uu ku taliyay in shaqsiga xil noocaasi ah loo dhiibayo ay DF ka fiirsato, waxa uuna wax laga xumaado ku tilmaamay hadalka uu kala kulmay Danjiraha.
Dhanka kale, Prof Maxamuud Siyaad ayaa ka digay in la fududeysto qaadashada dhaqano noocaasi ah, waxa uuna maalin mugdi ah ku sifeeyay maalintii loo soo diray lacagta iyo dumarka.